Job 37 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
37 “N’ezie, obi m malitere ịma jijiji+ n’ihi nke a,Obi na-amapụkwa m. 2 Ṅaanụ ntị nke ọma nụrụ wuruwuru olu ya na-azụ,+Nakwa mbigbọ nke si ya n’ọnụ apụta. 3 Ọ na-atọhapụ ya n’okpuru eluigwe dum,Àmụ̀mà+ ya na-erukwa n’ebe niile ụwa sọtụrụ. 4 Oké ụda na-esochi ya;Ọ na-eji ụda olu ya dị ike+ ebigbọ dị ka égbè eluigwe,+Ọ dịghịkwa ahapụ ibigbọ mgbe a nụrụ olu ya.+ 5 Chineke na-eji olu ya ebigbọ+ n’ụzọ dị ebube,Na-emekwa oké ihe dị iche iche anyị na-apụghị ịmata.+ 6 N’ihi na ọ na-asị snoo, ‘Daa n’ụwa,’+Ọ na-agwakwa oké mmiri ozuzo ka o zoo, ọbụna oké mmiri ozuzo ya nke dị ike.+ 7 Ọ na-eme ka ọrụ mmadụ efu ọ bụla na-arụ kwụsị,Ka mmadụ efu ọ bụla wee mata ọrụ ya. 8 Anụ ọhịa na-anọ n’ebe zoro ezo,Ọ bụkwa n’ebe ọ na-ezo ka o bi.+ 9 Ifufe mmiri na-esi n’ime ụlọ+ ya abịa,Oyi na-esikwa n’ifufe nke si n’ebe ugwu abịa.+ 10 Ọ bụ ume Chineke kupụrụ na-eme ka e nwee mkpụrụ mmiri,+Ọ na-akpakwara ogbu mmiri ókè.+ 11 Ee, ọ na-eme ka mmiri na-anyịgbu ígwé ojii,Ìhè+ ya na-emekwa ka ígwé ojii gbasasịa, 12 Nduzi ya na-eme ka ha na-aga okirikiri ịrụ ọrụ haN’ebe ọ bụla o nyere iwu+ ka ha gaa n’elu ala. 13 Ọ na-eji ya emere ụtarị+ ma ọ bụ jiri ya dee ala+Ma ọ bụ jiri ya gosi obiọma.*+ 14 Ṅaa ntị na nke a, Job;Guzo ma chebara ọrụ dị ebube nke Chineke echiche.+ 15 Ị̀ maara mgbe Chineke nyere ha iwu,+Mgbe o mekwara ka ìhè ígwé ojii ya nwuo? 16 Ị̀ maara otú ígwé ojii si kwụrụ,+Bụ́ ọrụ dị ebube nke Onye nwere ihe ọmụma zuru okè?+ 17 Ị̀ maara otú uwe gị si ekporo ọkụMgbe ụwa dara jụụ site n’ebe ndịda?+ 18 Ị̀ pụrụ iso ya jiri ihe tisaa mbara igwe,+Nke dị ka enyo siri ike nke a wụrụ awụ? 19 Gwa anyị ihe anyị ga-agwa ya;Anyị apụghị ikwu okwu n’ihi ọchịchịrị. 20 À ga-akọrọ ya akọrọ na m ga-ekwu okwu?Ka è nweela onye kwuru na a ga-akọrọ ya?+ 21 Ugbu a, ha adịghị ahụ ìhè;Ọ na-egbuke egbuke na mbara igwe,Mgbe ifufe fefere wee zachaa ha. 22 N’ugwu ka ịma mma nke yiri ọlaedo si abịa.Ebube+ Chineke dị egwu. 23 Anyị amatabeghị ihe niile banyere Onye Pụrụ Ime Ihe Niile;+Ike ya dị ukwuu,+Ọ gaghịkwa eleda+ ikpe ziri ezi+ na ezi omume+ dị ukwuu anya. 24 Ya mere, ka ndị mmadụ tụọ egwu ya.+O dịghịkwa eji onye ọ bụla nke maara ihe n’obi ya akpọrọ ihe.”+